Nanoradar dia manasa mpiray antoka aminy hiaraka aminay amin'ny CPSE 2019 ao Shenzhen China-News-Hunan Nanoradar Science & Technology Co., Ltd.,
Nanoradar dia manasa mpiara-miasa hiaraka aminay amin'ny CPSE 2019 any Shenzhen China
Fotoana: 2019-10-17 Hits: 50
Amin'ny herinandro ho avy, mandritra ny 28-31 Oktobra 2019, CPSE 2019-Hisokatra ny Stozhen China 17th China Expo. CPSE China Public Security Expo (Shenzhen), miaraka amin'ny ezaka 30 taona, no manao ny fampiratiana indrindra manerantany.
Nanoradar dia mankasitraka anao ny manasa anao hitsidika ny toerana misy anay raha sendra mandalo ianao.
28 oktobra, Hall 31; Mitsangana 8.0B8
Mandritra ny fampirantiana, i Nanoradar dia hampiseho ny rafitra fanairana fanaraha-maso horonantsary radar ho fiarovana ny vondro-baravarankely. Ny demo mivantana dia halamina amin'ny 28 sy 29 oktobra. Raha misy zavatra tianao hahalala bebe kokoa dia alefaso aminay ny fanontanianao.
Radar Video Surveillance System, natao handefasana fanairana amin'ny lasibatra miaraka amin'ny toerana sy ny lalana, mirakitra ny horonantsary fanairana amin'ny fotoana fanairana sy hisorohana ny fidirana an-tsokosoko alohan'ny perimeter, dia fakan-tsarimihetsika 24TVz, fakan-tsary HD PTZ ary mpizara rindrambaiko RVS. Ny rafitra dia mety mifanaraka amin'ny ONVIF NVR avy amin'ny tsena. Radar dia mikaroka ireo lasibatra amin'ny alàlan'ny fisavana marika, avy eo mitarika ny fakan-tsary PTZ amin'ny fisavana. Miaraka amin'ny famantarana indroa ny fanaraha-maso lahatsary, mandefa fanairana marina amin'ny foibe fanaraha-maso ny fiarovana ary mampihena be ny fanairana diso.
2. Mikendry maro be hatrany hatramin'ny 10 miaraka
4. Aza hadino velively, fanairana diso
5. Mora ny mametraka sy mifanentana amin'ny ONVIF CCTV NVR eny an-tsena
PREV: Manafaka ny firmware vaovao UAVs Altimeter i Nanoradar - izay afaka mifandray mivantana amin'ny Ardupilot
MANARAKA : Fangaro amin'ny habaka dimam-pandefasana ▏How onjam-piraofan'ny fantsim-piterahana dia manampy fanampiana azo antoka amin'ny fitaovana Heavy